Umhla My Pet » Izihloko Dating Incoko online 100% impumelelo
ukubuyekezwa: Apr. 06 2020 | 2 min ukufunda
Minyaka ilishumi idlulileyo iye wabona amadoda amaninzi nabafazi kungakhathaliseki ubudala kwabo ukuthandana online ngokuniguqula. Ngokutsho Uphando oluqhutywe ngoJulayi, 2014, ngoku lizwe 41,250,000 abantu abaye bazama ukuthandana online ngaxa lithile ebomini babo.
Ukuqwalasela okhoyo US ku 361.1 kwezigidi, kunokuthiwa ukuba ingqikelelo ukuthandana online ikwazile ukuba woo ngaphezu 11% abantu kweli lizwe. Ngoko ke, yintoni na ezi 11% abantu bethetha xa bedibene ukutshata kwabo online?
Le ncoko okunene iqala kakhulu phambi kwabantu bedibene kwinxiwa ukuthandana online. Ukwandisa amathuba akho okufumana liqabane elifanelekileyo, kufuneka abe nembonakalo egqibeleleyo, iprofayili ukuba uthetha ngokwakho. Oku kufuneka sithwale isihloko ngumbulali, iifoto zakho okusemandleni kwaye ulwazi ufuna abantu bazi ngaphambi ebonisa umdla uncokola nawe. Ukuba unayo inkangeleko egqibeleleyo, amathuba akho ukuhlangabezana ngumntu ofezekileyo online liya kuba ngaphezulu kakhulu.
Ngoku ukuba Ufanelwe bancoma ukuba ukuthetha umbuzo Utsho izihloko ibhetele ukuluthetha zezi. Nanga amacebiso ambalwa ngezihloko incoko online ukuthandana.
Kukho bambalwa ke awuyithandi isincomo. Ngoko ke, kokuba uqalise incoko nokumncoma omnye umntu. Indlela efanelekileyo kukuba uqale ngokudumisa izigqibo ezenziwa nguye / yakhe. Njengokuba, uyakwazi kubulela ukhetho umntu ngayo ukutya, isongo umculo, etc. Oku kuya kwenza iqabane lakho ezinokubakho ukuqonda ukuba abeke kwindawo kakhulu umgudu ukuze bafunde / inkangeleko yakhe.
Ukufunda iprofayili ukuthandana online zomntu iya kuvumela ukuba ukwazi ngabalawulwa / ukuba unomdla. kubo, ukukhetha izifundo ukuba nomdla wena njengoko incoko enambuzelayo phambili, ndiqalise ukuthetha kuzo. Oku kuya kwenza lencoko ngakumbi umdla omabini amaqela. Ukuba awunalo ukwabelana nomdla kumntu othile, yena / yena ayisiyiyo umntu ilungelo umhla.
Njengokuba uqala uziva ukhululekile bencokola kunye nomntu, ungaqalisa ngokuxoxa ngobomi. Kukho kunokuba bencokola ngezinto ozenzileyo ebomini, ijonge ebomini, uhlobo ebuntwaneni kwafuneka, kwaye nangokunjalo. Kancinane njengoko omnye umntu uqala ukusabela ngokwabelana amabali / ubomi bakhe bakhe, uya kufumana lencoko lisiba ezinomdla kakhulu. Ngokunqwenelekayo, akufunekanga ukuqala ukuthetha malunga nobudlelwane elidlulileyo ngexesha lokuqala ukuncokola ukuba; izihloko ezifana kufuneka kuxoxwe kwakuba ababini uqale ukuqonda nabanye kakuhle.
Uninzi daters online Ndiyakuthanda udibane nabantu enokubenza kuhleka; lo umi nokuba yokwenene isini bengabakho. Ngoko ke, wabelana ezimbalwa olugoso plastikhi-nye neziqhulo yindlela kakhulu yokwenza incoko ebangel ngaphezulu. Ungaze uzame ukuba samasi enoburharha yakho, kwaye uphephe bahlekisa mntu uncokola.
izihloko ukuthandana incoko intanethi badla ingohluka ngokuxhomekeke incasa, befundile nobudala abantu. Ngoko ke, Xa ukhetha isihloko incoko ngexesha umhla online kufuneka uzigcine ezi zinto engqondweni.